बिष्णु र मोहनको “सानु माया” (गीत) | Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal Site
Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal Site
Home / Music / बिष्णु र मोहनको “सानु माया” (गीत)
बिष्णु र मोहनको “सानु माया” (गीत)
— June 12, 2019019
फिल्मी फण्डा । चर्चित लोकप्रिय गायिका बिष्णु माझि र गायक मोहन खड्काको “सानु माया” बोलको लोक दोहोरी गीत सार्वजनिक भएको छ । धेरै गीतहरुमा आफ्नो स्वर दिइसकेकी चर्चित लोकप्रिय गायिका बिष्णु माझिको उक्त गीत ‘सानु माया’मा माया प्रेमको साथ साथै शङ्काको कुरा पनि समावेश गरिएको छ । शंकर देवकोटा र सन्ध्या देवकोटाको शब्द रहेको उक्त गीतमा अमित बाबु रोकायाको संगीत रहेको छ ।
बिमल अधिकारी र सगुन शाहीको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो हरिस महराले छायाँकन गरेका हुन् । कपिल लामाको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई अमर शाक्यले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सुजन र सपनाको “म बाँचेर” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक कुशल बिश्वकर्मा र गायिका अनुजा पुडासैनीको “म बाँचेर” बोलको लोकदोहोरी गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक कुशल बिश्वकर्माको नै शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा मायामा भएको धोकालाई समावेश भएको छ ।
सुजन कोइराला र सपना लामाको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो सागर गौतमले छायाँकन गरेका हुन् । कुशल बिश्वकर्माको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई प्रदिप दहालले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : आकाश र निशाको “हेरन माया” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक आकाश लामा र श्रीजना स्याङतानको “हेरन माया” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक आकाश लामाको नै शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा फडिन्द्र राईको एरेंज रहेको छ । माया प्रेमको भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा माया गर्ने बिचको मायाका कुरालाई समेटिएको छ ।
आकाश लामा , निशा तामाङ र उसा तामाङको अभिनय रहेको गीतको भिडियोलाई सन्जीत श्रेष्ठले छायाँकन गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा एक माया गर्ने जोडीलाई देख्न सकिन्छ । छेवाङ लामाको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई बिजेश पौडेलले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : लक्ष्मीको “मेरो माया” (गीत)
फिल्मी फण्डा । लक्ष्मी हमालको “मेरो माया” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । लक्ष्मी हमालको नै शब्द रहेको उक्त गीतमा सन्जय हमालको एरेंज रहेको छ । गीतमा माया प्रमको भाव समावेश गरिएको छ ।
आर.जे शाही र सन्जु ढकालको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो इश्वर शिलवालले छायाँकन गरेका हुन् । सुजित उपाध्यायको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई इश्वर शिलवालले नै संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : पुर्णिमाको “यो जुनी त तिम्रै हो” (गीत)
फिल्मी फण्डा । पुर्णिमा लामाको “यो जुनी त तिम्रै हो” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । बिनोद सुनदासको शब्द रहेको उक्त गीतमा राजन परियारको संगीत रहेको छ भने बिश्वास नेपालको एरेंज रहेको छ । माया प्रेमको कुरा गरिएको उक्त गीतमा जुनीभर मायासँगै रहने भाव समावेश गरिएको छ ।
बिवेश सुनदास र अमुता भट्टको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो मुकेश हुमगााईले छायाँकन गरेका हुन् । बिनोद सुनदासको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई राजेश कुमारले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : तेजश र कुसुमको “बनपाले” गीत
फिल्मी फण्डा । गायक तेजश रेग्मी र गायिका कुसुम बुढाथोकीको “बनपाले” बोलको लोकदोहोरी गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक रेग्मीको नै शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा सुदिप सागरको एरेंज रहेको छ ।
तेजश रेग्मी ,सगुन , सन्चिता र केशब शर्माको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो अजय रेग्मीले छायाँकन गरेका हुन् । शिव बिकको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई सुजन शाहीले सम्पादन गरेका हु्न् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बिष्णु र टिकाको “स्वर्गकी परि” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक बिष्णु धामी र गायिका टिका पुनको “स्वर्गकी परि” बोलको देउडा गीत सार्वजनिक भएको छ । माया प्रेमका भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा लाल बहादुर थापाको शब्द तथा संगीत रहेको छ । देबिका बोगटी र राजेन्द्र बाजुरालीको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो डि.बि राउलेले छायाँकन गरेका हुन् ।
गीतको भिडियो फरक शैलीको रहेको छ भने एक माया गर्ने जोडीको मनको भाव समावेश गरिएको छ । भिम थापाको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई प्रविन रेश्मी मगरले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : रामकृष्णको “तिम्रो महल” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित लोकप्रिय गायक रामकृष्ण ढकालको “तिम्रो महल” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । माधव ढकालको शब्द रहेको उक्त गीतमा गैरे सुरेशको संगीत रहेको छ । धेरै गीतहरु गााइसकेका र सबैको मनमा बस्न सफल गायक रामकृष्ण ढकालको उक्त गीत ‘तिम्रो महल’मा माया प्रेमको भाव समावेश गरिएको छ ।
दिपेन गौतम र जुना सुनदासको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो गोपाल राय क्षेत्रीले छायाँकन गरेका हुन् । युवराज वाइबाको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई बिकास दहालले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सुपुष्पाको “जिन्दगी खास” (गीत)
फिल्मी फण्डा । लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्त र गायक कर्णराज गिरीको “जिन्दगी खास” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । मुक्त उदासको शब्द रहेको उक्त गीतमा अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको छ भने महाराज थापको एरेंज रहेको छ । माया प्रेमका गीत गाएर सबैको मनमा बस्न सफल गायिका अन्जु पन्तको उक्त गीत ‘जिन्दगी खास’मा पनि माया प्रेमको नै भाव समावेश गरिएको छ भने मायालाई बहुमूल्य भनिएको छ ।
नायिका सुपुष्पा भट्ट र रोहित थापाको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो अर्जुन तिवारीले छायाँकन गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा नायिका सुपुष्पा भट्ट र रोहित थापालाई एक माया गर्ने जोडीको रुपमा देख्न सकिन्छ । शान थापाको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई सुप्रिम पराजुलीले सम्पादन गरेका हुन् । गीतमा राजिव समरको करियोग्राफी रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : मेलिनाको “के यो माया हो” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित गायिका मेलिना राई र गायक दुर्गा बहादुर राईको “के यो माया हो” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । आसुतोष राईको शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा दिनेश न्यौपानेको एरेंज रहेको छ । माया प्रेमका गीत गाउने गायिका मेलिना राईको उक्त गीतमा माया प्रेमको भाव समावेश गरिएको छ ।
संपदा बानिया र योगेन्द्र राईको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो अमृत सुनुवारले छायाँकन गरेका हुन् । सन्दिप भुजेलको कोरियोग्राफीमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई नभ ढङगेलले निर्देशन गरेका हुन् भने नविन निरौलाले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सारा फिर्चड “सानु” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक असोक सिवाको “सानु” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । बिकास जङ न्यौपानेको शब्द रहेको उक्त गीतमा गायक असोक सिवाको नै संगीत रहेको छ भने गोपाल रसाइलीको एरेंज रहेको छ । माया पिरतीको भाव समावेश गरिएकोे उक्त गीतमा आफ्नो माया गर्ने मान्छेको बारे कुरा गरिएको छ । नायिका सारा शिर्पाली , रियाज आचार्य , मौसम खड्का , बिकास जङ न्यौपाने र असोक सिवाको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो अमृत बाबु केसीले छायाँकन गरेका हुन् ।
उक्त गीतको भिडियोमा नायिका सारा शिर्पालीलाई फरक लुक्समा देख्न सकिन्छ । प्रदिप कुमार चौधरीको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई बिकास दाहालले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : करिश्मा फिर्चड “पानी खोलाको” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक सुरेश गौतम र मिश्रा काफ्लेको “पानी खोलाको” बोलको लोकदोहोरी गीत सार्वजनिक भएको छ । बिनोद ढकालको शब्द रहेको उक्त गीतमा शोबित बि.सिको संगीत रहेको छ । एक माया गर्नै जोडीको मनको भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा माया ,प्रेम र जवानीको कुरा गरिएको छ ।
करिश्मा ढकाल र सन्जिब ठकुरीको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो दिपक गिरीले छायाँकन गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा करिश्मा ढकाल र सन्जिब ठकुरीको निकै राम्रो नृत्य देख्न सकिन्छ । निशान एस.के.को निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई प्रकाश एस.के.ले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सिडि बिजयको “जवानीको फूल”को कभर भिडियो प्रतियोगिता
फिल्मी फण्डा । सिडि बिजय अधिकारीको “जवानीको फूल” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । हरी उप्रेतीको शब्द रहेको उक्त गीतमा सिडि बिजय अधिकारीको नै संगीत रहेको छ भने रिकेश गुरुङको एरेंज रहेको छ । गीतको लिरकल भिडियो हार्दिक मिडियाको अफिसियल यूटुव च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
हार्दिक मिडियाले उक्त गीत जवानीको फूल को कभर भिडियो प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । कभर भिडियो बनाइरहेका देश तथा बिदेशमा रहने डान्सिङ ग्रुप तथा व्यक्तिहरुले उक्त गीतको कभर भिडियो बनाउन सक्ने छन् । कभर भिडियो मध्यको उत्कृष्ट कभर भिडियोलाई अफिसियल म्यूजिक भिडियो घोषणा गरि राष्ट्रिय स्तरका मिडियामा प्रचार प्रसार गरिने छ ।
उत्कृष्ट कभर भिडियो निर्माण गर्ने टिमलाई नगद राशि सहित सम्मान गरिने छ। उक्त कभर भिडियो प्रतियोगितामा भाग लिनका लागी कभर भिडियो बनाएर हार्दिक मिडियाको इमेलमा पठाउने पर्ने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : अलिसा र चक्रबमको “नांच पुतली” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित गायिका मेलिना राई र गायक टेक बिसीको “नाच पुतली” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । उमेश मुस्कानको शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा उदय राज पौडेलको एरेंज रहेको छ । धेरै चर्चित गीतहरु गाइसकेकी गायिका मेलिना राईको उक्त गीतमा दुई प्रेमीको मनको भाव समावेश गरिएको छ । अलिसा शर्मा र चक्रबमको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो अर्जुन तिवारीले छायाँकन गरेका हुन् ।
उक्त गीतको भिडियोमा अलिसा शर्मा र चक्रबमको निकै राम्रो नृत्य देख्न सकिन्छ । बिक्रम थौहानको कोरियोग्राफी तथा निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई सुप्रिम पराजुलीले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : हरकुलसको “शिर शिर हावा” (गीत)
फिल्मी फण्डा । जसोदा सुब्बाको “शिर शिर हावा” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतमा चर्चित हरकुलस बस्नेतको शब्द तथा संगीत रहेको छ । धेरै चर्चित गीतहरुबाट सबैको मनमा बस्न सफल हरकुलस बस्नेतको शब्द रहेको उक्त गीत “शिर शिर हावा” मा माया प्रेम र सपनाको कुरा गरिएको छ ।
बिशाल र जसोदा सुब्बाको नै अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो रुपेश थापाले छायाँकन गरेका हुन् । रुपेश थापाको नै निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई मार्घराज मङराती र रुपेश थापाले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : जेविका र गम्भीरको “हे बरै” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित गायक भुवन प्यासी र गायिका मेलिना राईको “हे बरै” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा मिस्टर आरजेको र्याप रहेको छ । गायक भुवन प्यासीको नै शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा पुस्कर सुनुवारको एरेंज रहेको छ । लोक, आधुनिक र र्याप मिसिएको उक्त गीतमा माया प्रेमको भाव समावेश गरिएको छ ।
गम्भीर विष्ट , भुवन प्यासी र जेविका कार्कीको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो अर्जुन तिवारीले छायाकंन गरेका हुन् । शिव विकले निर्देशन तथा कोरियोग्राफीमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई सुप्रिम पराजुलीले सम्पादन गरेका हुन् ।
Previous Article ट्रोलको शिकारमा सुहाना
Next Article सुर्यवंशीको नयाँ रिलिज डेट सार्वजनिक
अमृतको “भुल” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक अमृत कुमार भट्टको “भुल” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । घनश्याम श्रेष्ठको शब्द रहेको उक्त गीतमा बबिन ढुङ्गानाको संगीत रहेको छ भने शम्भु बाँनियाको एरेन्ज रहेको छ । माया गरेर भुल गरे भन्ने भाव समावेश उक्त गीतमा मायालुलाई भुल्न चाहेको कुरा गरिएको छ । अमृता भट्ट र मोहन राईको अभिनय रहेको उक्त…
पवित्रा र आर.सिको “मायाको चिनो” (गीत)
फिल्मी फण्डा । पवित्रा गुरुङ र आर.सि रिमालको “मायाको चिनो” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतमा नगवा पिन्जु पाख्रीनको शब्द तथा संगीत रहेको छ । माया प्रेमको भाव समावेश उक्त गीतमा आफ्नो मायालुको बयान गरिएको छ । सन्जय गुरुङ र अनुसाया थकुरीको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो अजय रेग्मीले छायाँकन गरेका हुन् ।…
बिमल र सारिकाको “घाईते मुटु दुख्छ” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित लोकप्रिय गायिका पुर्नकला बि.सि र गायक लक्ष्मण गिरिको “घाईते मुटु दुख्छ” बोलको लोकदोहोरी गीत सार्वजनिक भएको छ । कमल बुढाथोकिको शब्द रहेको उक्त गीतमा अमरदिप बुढाथोकिको संगीत रहेको छ । मायालुले धोका दिएको पिडा समेटिएको उक्त गीतमा मायाले गर्दा मुटु दुखेको कुरा गरिएको छ । बिमल अधिकारी , सारिका केसी , निश्चल…
करिश्मा फिर्चड “झुमेर” (गीत)
फिल्मी फण्डा । देश नरेश अधिकारीको “झुमेर” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । मिलन पुनको शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा गणेश चौधरीको एरेंज रहेको छ । करिश्मा ढकाल , सन्जु चौधरी र दिलिप माझीका अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो नरेश अएरले छायाँकन गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा करिश्मा ढकालको निकै राम्रो नृत्य देख्न सकिन्छ…
आकाश , वर्षा र निराजनको “दिल तोडेर गयौ” (गीत)
फिल्मी फण्डा । जगदिस समालको “दिल तोडेर गयौ” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । सुरेन्द्र थेगीमको शब्द रहेको उक्त गीतमा नारायण सुबेदि आवासको संगीत रहेको छ भने फडिन्द्र राईको एरेंज रहेको छ । माया प्रेमको बिछोडमा हुने पिडाको भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा मायालुले दिल तोडेर गएको कुरा गरिएको छ । नायिका वर्षा राउत , नायक…
अन्जली फिर्चड “म निदाएसी आयौ” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक नवराज सापकोटाको “म निदाएसी आयौ” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । नरेश गौतमको शब्द रहेको उक्त गीतमा एनके ब्रदरर्सको संगीत रहेको छ भने रिदम कडेंलको एरेंज रहेको छ । गीतमा एक प्रेमीको मनको भाव समावेश गरिएको छ भने मायालु निदाएपछि आएको कुरा गरिएको छ । अन्जली अधिकारी , जीवन भट्राई र रिचा…
प्रमोद खरेलको ‘एउटा गीत’ (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा मार्मिक गीत ‘एउटा गीत’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा दिवान किनारको संगीत र एरेन्ज, आर के रम्तेलको शब्द र प्रमोद खरेलको आवाज रहेको छ । गीतमा गोपाल साउदको निर्देशन, पिएस बिडारीको छायाँकन र गोबिन्द लाहोरियाको सम्पादन रहेको छ । गीतको भिडियोमा गोपाल साउद, निरु कौर, रोहित शर्मा र नेहा…
निरज र आसिकको “बुझिदेउ” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक राज लिम्बुको “बुझिदेउ” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक राज लिम्बुको नै शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा बिश्व अधिकारीको एरेंज रहेको छ । आफुलाई आमा , बुबा , साथी कसैले पनि नबुझदाको पिडा समावेश गरिएको उक्त गीतमा आफुलाई बुझिदिन आग्रह गरिएको छ । निरज , आसिक , लक्ष्मण चौलागाई र…
अनिस र बिपनाको “रंग गुलावको” (गीत)
फिल्मी फण्डा । पुरर्षोत्तम सुवेदिको “रंग गुलाव”को बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । निरपेश उप्रेतीको शब्द रहेको उक्त गीतमा पुरर्षोत्तम सुवेदिको नै संगीत तथा एरेंज रहेको छ । माया प्रेमको भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा एक प्रेमीको मनको भाव समावेश गरिएको छ । अनिस तिमिलसिना र बिपना सुनुवारको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो प्रकाश बुढाथोकीले…
मेलिना र सुरेशको “यो मुटुको कुनामा” (गीत)
फिल्मी फण्डा । लोकप्रिय गायिका मेलिना राई र गायक सुरेश लामाको “यो मुटुको कुनामा” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । लाल हाङ्ग लिम्बुको शब्द रहेको उक्त गीतमा शंखर थापा स्माएलको संगीत रहेको छ भने उदय राज पौडेलको एरेन्ज रहेको छ । मायालु आएपछि जीवनमा खुसी आएको कुरा गरिएको उक्त गीतमा मायालु नभए जीवनको अर्थ नहुने…
रविनको “दिलहीरा” (गीत)
फिल्मी फण्डा । रविन कान्दङवाको “दिलहीरा” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । नवराज लम्सालको शब्द रहेको उक्त गीतमा हरि लम्सालको संगीत रहेको छ । मायाको भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा मायाको बयान गरिएको छ भने उसलाई नै आफ्नो संसार भनिएको छ । दीपा चाम्लिङको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो अमृत सुनुवारले छायाँकन गरेका हुन् । गीतको…
रामजी र करिश्माको “भन के लाउली” (गीत)
फिल्मी फण्डा । नेपाली नारीहरुको महान चाड तीज नजिकिदैँ गर्दा गायक उज्जवल केसी र जुना श्रीस मगरको “भन के लाउली” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक उज्जवल केसीको नै शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा सागर विरहीको एरेंज रहेको छ । दुई प्रेमी बिचको भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा मायालुलाई तीजमा के लाउने त्यहि…
हेमन्तको “माया बस्यो है” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित गायक हेमन्त रानाको “माया बस्यो है” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक हेमन्त रानाको नै शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा विशाल पौडेलको एरेन्ज रहेको छ । धेरै चर्चित गीतहरुमा आफ्नो स्वर दिएका गायक हेमन्त रानाको चर्चित गीत साईली पछि माया बस्यो है गीत सार्वजनिक भएको छ । आफुलाई मन…
शिव र मेलिनाको “फिलिलिली” मा बले (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित लोकप्रिय गायक शिव परियार र गायिका मेलिना राईको “फिलिलिली” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । सिर्जना घिमिरेको शब्द रहेको उक्त गीतमा बादल घिमिरेको संगीत रहेको छ भने शाहस शाक्यको एरेंज रहेको छ । धेरै चर्चित गीतहरु गाइसकेका लोकप्रिय गायक शिव परियार र गायिका मेलिना राईको उक्त गीत फिलिलिली मा माया पिरतीको कुरा…
प्रकाश र सुजताको “जहाजैमा चढेर” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक अमृत रेगमी र सम्झना भण्डारीको “जहाजैमा चढेर” बोलको तीज गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक अमृत रेगमीको नै शब्द रहेको उक्त गीतमा प्रेम सापकोटा सोनुको शब्द रहेको छ भने केश्व बडुको एरेंज रहेको छ । मायाको कुरा गरिएको उक्त गीतमा मायालुलाई घुमाउन लाने कुरा गरिएको छ । प्रकाश सपुत र सुजता भट्टको…
करिश्माको “जाले रुमालैमा” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक तथा सर्जक गणेश अधिकारी र गायिका आरती खड्काको “जाले रुमालैमा” बोलको तिज गीत सार्वजनिक भएको छ । दल थापा घर्ति र कृष्ण सौरागको शब्द रहेको उक्त गीतमा मोहन विकको संगीत रहेको छ भने बिनोद बजुरालीको एरेंज रहेको छ । माया प्रेमको भाव समावेश गरिएको उक्त तिज गीतमा मायालुलाई मने पर्ने जाले…
मिस्टर आरजेको “साली भनौला” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक हेमराज थापा (बाबु राजा) र सोनु कुश्मिको “साली भनौला” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। उक्त गीतमा चर्चित र्‍यापर राजेन्द्र भट्ट (मिस्टर आरजे)को र्‍याप रहेको छ । प्रकाश मिश्रको शब्द रहेको उक्त गीतमा गायक हेमराज थापाको नै संगीत रहेको छ भने पुष्कर सुनारको एरेन्ज रहेको छ । दुई माय गर्ने प्रेमीको मनको भाव…
रेनुको “जानी नजानी” (गीत)
फिल्मी फण्डा । रेनु अधिकारीको “जानी नजानी” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । रेमान्त राज थापाको शब्द रहेको उक्त गीतमा मदन गोपालको संगीत रहेको छ । मायामा भएको पिडाको भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा जानी नजानी गल्ती भएको कुरा गरिएको छ । सन्चिता शाहि र दिनेश केसीको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो रविन्द्र बरालले छायाँकन…
अञ्जुको “गीत तिम्रो” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायिका अञ्जु पन्तको “गीत तिम्रो” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । सविन प्रियासनको शब्द रहेको उक्त गीतमा पुरुषोत्तम न्यौपानेको संगीत रहेको छ भने रिकेश गुरुंङको एरेन्ज रहेको छ । धेरै माया प्रेमका गीत गाउने गायिका अन्जु पन्तको उक्त गीतमा पनि माया प्रेमको नै भाव समावेश गरिएको छ भने मायालुको गीत भएको कुरा गरिएको…
आँचलको “माया सरर” (गीत)
फिल्मी फण्डा । सचिन रौनियार र जितेन लाप्चाको “माया सरर” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । जितेन लाप्चाको नै शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा फडिन्द्र राईको एरेंज रहेको छ । माया प्रेमका भाव समेटिएको उक्त गीतमा मायालुलाई आफ्नो मनमा राख्ने र सधैँ खुसी राख्ने कुरा गरिएको छ । नायिका आँचल शर्मा ,सचिन रौनियार र…
Filmy Fanda TV
गलबन्दी चोरी काण्ड – सामाजिक सञ्जाद हुँदै संसदसम्म
जता पुष्प त्यतै आँचल
लहरोले पहरो तान्दा– गलबन्दी चोरी काण्ड
जब पहिरनले नायिकालाई धोका दियो (भिडियो)
माग्नेदेखी अनमोल सम्मको दशै विशेष (फेटो फिचर)
फिल्म समिक्षा : चुटकिलाले बचाएको फिल्म छक्का पञ्जा २
यौनकर्मीको भुमिका गरेकी बलिउडका हिट ८ अभिनेत्री (फोटो फिचर सहित)
अन्तत: अनमोलको हिरोइन फाइनल, उपासनासँग रोमान्स गर्दै अनमोल
साउन १० बाट रिलिज हुने ‘एकलब्य’को “पूर्वै चल्नेया रेल” (गीत)
Balami Film Entertainment Pvt. Ltd.
Address: Balaju-16, Kathmandu
Managing Director: Kabita Balami
Editor-In-Chief: Sameer Balami
Editor: Maheshwor Tamang
Sub Editor: Shyam Sundar Pudasaini
Photo/Video: Sanchu Thokar Lama
Website/Graphic: Ram Panta
Subscribe Filmy Fanda TV
Copyright 2017 – FilmyFanda.com, All Rights Reserved.